ခြောကလကျကို နတေို့ငျးစားပေးသငျ့တဲ့ အခကျြ (၅) ခု
HomeKnowledgeခြောကလကျကို နတေို့ငျးစားပေးသငျ့တဲ့ အခကျြ (၅) ခု
H August 26, 2021
ခြောကလကျ ကွိုကျသူတှကေ ခြောကလကျတှကေို အမြားကွီး စားတတျလို့ တခါတလမှော ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတောငျ သံသယ ရှိလာမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ခြောကလကျ ကွိုကျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး နောကျထပျ စိတျပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အနကျရောငျ ခြောကလကျမှာ ကိုကိုး ပါဝငျမှုနှုနျးမြားလို့ အတျောကို အရသာ ရှိပါတယျ။ ဒါတငျ မကပါဘူး။ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး အလှနျကို သငျ့တျောပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးရှိတဲ့ ခြောကလကျကို နတေို့ငျးစားပေးသငျ့ပါတယျ။
1. စိတျဓာတျ တကျကွှစတေယျ။
အနကျရောငျ ခြောကလကျကို အနညျးငယျ စားပေးရုံနဲ့ အလုပျတှကေို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ လုပျကိုငျနိုငျမှာပါ။ အနကျရောငျ ခြောကလကျမှာ အမိုငျနိုအကျစဈ ပါဝငျပါတယျ။ အမိုငျနိုအကျစဈက ဦးနှောကျကို မှတျသားနိုငျစှမျးမွငျ့မားစပေါတယျ။ စိတျကိုလညျး ပြျောရှငျစပေါတယျ။
2. ဦးနှောကျအတှကျ အာဟာရ
ခြောကလကျစားခွငျးက ဦးနှောကျကို ထကျမွကျစပွေီး ဦးနှောကျ ထိခိုကျဒဏျရာရမှုကိုလညျး ကာကှယျပေးတယျလို့ သုတသေနတဈခုမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ နှဈပေါငျး 40 ကွာ အခြိနျယူပွုစုနခဲ့တဲ့ သုတသေနတဈခုမှာ ခြောကလကျကို မကွာခဏ စားတဲ့လူတှကေ ဦးနှောကျကိုသုံးရတဲ့ လုပျငနျးတှမှော ပိုပွီးအလုပျလုပျနိုငျတယျ လို့ ရေးသားထားပါတယျ။
3. အစာခဖြေကျြမှုအတှကျ အကြိုးရှိတယျ။
အနကျရောငျ ခြောကလကျမှာ ပြျောဝငျနိုငျတဲ့ အမြှငျဓာတျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ အမြှငျဓာတျတှကေ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ကိုလကျစထရော level ကို ထိနျးညှိပေးရာမှာ အကူအညီ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အနကျရောငျ ခြောကလကျက အစာခဖြေကျြမှုအတှကျ အကြိုးရှိပွီး ကိုယျခန်ဓာ အလေးခြိနျကိုလညျး ထိနျးခြူပျပေးပါတယျ။
4. ကလေးတှကေို ပြျောရှငျစတေယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ခြောကလကျကို ပိုစားပေးရငျ ပြျောပြျောရှငျရှငျ နတေတျတဲ့ ကလေးတှကေို ရနိုငျခြေ ပိုမြားတယျလို့ ဖငျလနျနိုငျငံရဲ့ သုတသေနစာတမျးတဈစောငျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးတှကေ ခြောကလကျကို ခငျြခွငျးတပျတယျ ဆိုရငျတော့ အလြှော့ပေးလိုကျပါ။ ကလေးအတှကျ အကြိုးရှိပါတယျ။
5. နှလုံးကို ကနျြးမာစတေယျ။
အနကျရောငျ ခြောကလကျက နှလုံးသှေးကွောနဲ့ဆိုငျတဲ့ ရောဂါဖွဈနိုငျခကြေို လြှော့နညျးစပေါတယျ။ တဈပတျမှာ ခြောကလကျကို ငါးကွိမျနဲ့အထကျ စားတဲ့သူတှကေ နှလုံးသှေးကွောနဲ့ဆိုငျတဲ့ ရောဂါဖွဈနိုငျခြေ 57 ရာခိုငျနှုနျး လြော့သှားတယျလို့ လလေ့ာခကျြတဈခုကမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နောကျတဈခါ စတိုးဆိုငျတှကေို သှားရငျ ခြောကလကျ အထုတျကွီးကွီးသာ ဝယျလာလိုကျပါ။ ခြောကလကျက သငျ့ကနျြးမာရေးကို အထူးကောငျးစတေယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့နျော..
ချောကလက်ကို နေ့တိုင်းစားပေးသင့်တဲ့ အချက် (၅) ခု
ချောကလက် ကြိုက်သူတွေက ချောကလက်တွေကို အများကြီး စားတတ်လို့ တခါတလေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် သံသယ ရှိလာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ချောကလက်ကြိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အနက်ရောင် ချောကလက်မှာ ကိုကိုး ပါဝင်မှုနှုန်းများလို့ အတော်ကို အရသာ ရှိပါတယ်။ ဒါတင် မကပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အလွန်ကို သင့်တော်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ချောကလက်ကို နေ့တိုင်းစားပေးသင့်ပါတယ်။
1. စိတ်ဓာတ် တက်ကြွစေတယ်။
အနက်ရောင် ချောကလက်ကို အနည်းငယ် စားပေးရုံနဲ့ အလုပ်တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ လုပ်ကိုင်နိုင်မှာပါ။ အနက်ရောင် ချောကလက်မှာ အမိုင်နိုအက်စစ် ပါဝင်ပါတယ်။ အမိုင်နိုအက်စစ်က ဦးနှောက်ကို မှတ်သားနိုင်စွမ်းမြင့်မားစေပါတယ်။ စိတ်ကိုလည်း ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
2. ဦးနှောက်အတွက် အာဟာရ
ချောကလက်စားခြင်းက ဦးနှောက်ကို ထက်မြက်စေပြီး ဦးနှောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ သုတေသနတစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း 40 ကြာ အချိန်ယူပြုစုနခဲ့တဲ့ သုတေသနတစ်ခုမှာ ချောကလက်ကို မကြာခဏ စားတဲ့လူတွေက ဦးနှောက်ကိုသုံးရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ် လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
အနက်ရောင် ချောကလက်မှာ ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုလက်စထရော level ကို ထိန်းညှိပေးရာမှာ အကူအညီ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနက်ရောင် ချောကလက်က အစာချေဖျက်မှုအတွက် အကျိုးရှိပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ အလေးချိန်ကိုလည်း ထိန်းချူပ်ပေးပါတယ်။
4. ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ချောကလက်ကို ပိုစားပေးရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေတတ်တဲ့ ကလေးတွေကို ရနိုင်ချေ ပိုများတယ်လို့ ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ သုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေက ချောကလက်ကို ချင်ခြင်းတပ်တယ် ဆိုရင်တော့ အလျှော့ပေးလိုက်ပါ။ ကလေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။
5. နှလုံးကို ကျန်းမာစေတယ်။
အနက်ရောင် ချောကလက်က နှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့နည်းစေပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ချောကလက်ကို ငါးကြိမ်နဲ့အထက် စားတဲ့သူတွေက နှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ 57 ရာခိုင်နှုန်း လျော့သွားတယ်လို့ လေ့လာချက်တစ်ခုကမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် နောက်တစ်ခါ စတိုးဆိုင်တွေကို သွားရင် ချောကလက် အထုတ်ကြီးကြီးသာ ဝယ်လာလိုက်ပါ။ ချောကလက်က သင့်ကျန်းမာရေးကို အထူးကောင်းစေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့နော်..